बुबाको लाश लिएर मलामी गएका ३ जना छोराको बस दुर्घटना हुदा एकै साथ मृत्यु ! - nepal day
बुबाको लाश लिएर मलामी गएका ३ जना छोराको बस दुर्घटना हुदा एकै साथ मृत्यु !
प्रकासन मिति : ३० बैशाख २०७९, शुक्रबार ०९:१३
पाल्पामा भएको मलामी सवार बसमा दुर्घटनामा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । बुटवलदेखि रिडी हिँडेको मलामी सवार बस पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकास्थित लघुवामा दुर्घटना हुँदा आठ जनाको मृत्यु भएको हो । आइतबार बिहान साढे १० बजे ३५ जना मलामी सवार लु १ ख ७२७९ नम्बरको बस दुर्घटना भएको हो ।